Madaxda dowladda ee Muqdisho joogta oo ilaaladooda la diiwaangelinayo | Jubbaland Media Online
Madaxda dowladda ee Muqdisho joogta oo ilaaladooda la diiwaangelinayo
Wasaaradda amniga dowladda Soomaaliya ayaa soo saartay awaamiir cusub oo la xiriira sugidda amniga magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, kaa oo ku aadan in la yareeyo hubka tirada badan ee lagu dhex wato magaalada Muqdisho.
Horaantii bishii May ayay golaha wasiirada xukuumadda Sooomaaliya isku raaceen go’aano dhowr ah oo lagu xasilinayo caasimadda, waxaana qeyb ka ahaa in Muqdisho laga mamnuucay hubka culus iyo gaadiidka dagaalka in lagu dhex wato.
Wasiirka amniga dowladda Soomaaliya Mudane Max’ed Abuukar Ducaale ayaa sheegay in masuuliyiinta ka tirsan dowladda laga doonayo in mudo 14 cisho gudahooda ah ay kusoo diiwaangeliyaan ilaaladooda gaarka ah.
Wasiirka ayaa ugu baaqay xildhibaannada labada aqal, wasiiradda iyo xubnaha kale ee dowladda in mudadaasi ay kusoo diiwaangeliyaan ilaaladooda.
Arrintan ayaa qeyb ka ah qorsheyaasha dowladda ee lagu xasilinayo caasimadda.